မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: My Favorite Galaxy Note2Features
Posted by mabaydar at 10:56 AM
ဟားဟား ကောင်းရော ဒီဖုန်းတော့ ပျောက်ရဲတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ပျောက်သွားရင် သူကို trace လိုက်မယ့် app တွေနဲတာမဟုတ်ဘူး။
11/07/2012 12:55 AM
အင်း... မဗေဒါလို ဖုန်းပျောက်တတ် မေ့တတ်တဲ့သူအတွက်တော့ အကြိုက်ပေါ့... ဒါနဲ့ အဲဒိ service က Samsung က သူ့ပစ္စည်းတွေကို ပေးတဲ့ Service... App မဟုတ်ဘူး...
11/07/2012 8:17 AM
If I have to guess, I would think you would get an iphone. Yeah Note2is one of the best smart phones right now. You should try "swiftkey " app. If I have to choose android over ios , it could be one of the reasons.
11/12/2012 4:32 AM